Wasaaradda Amniga XFS oo sheeegtay in Gacanta lagu dhigay 3 ka mid ah Ragii weerarka gaystay | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasaaradda Amniga XFS oo sheeegtay in Gacanta lagu dhigay 3 ka mid...
Wasaaradda Amniga XFS oo sheeegtay in Gacanta lagu dhigay 3 ka mid ah Ragii weerarka gaystay
Laamaha amaanka Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa galinkii dambe ee Xalay soo gaban-gabeeyay weerar maleeshiyaadka nabad diidka ah ee Al shabaab ku qaadeen shalay galabnimadii shalay Hotelka Naasahablood 2 ee Degmada Xamar-weyne.
Wasaaradda Amniga XFS ayaa sheegtay in ay gacanta ku dhigeen Ciidamada gaar ah ee Dowladda Federaalka Soomaaliya Maleeshiyaad ka tirsan dhagar qabayaashii weerarka kusoo qaaday Hotelka Naasahablood labo ee Degmada Xamar-weyne halka qaar ka mid ahna ay Ciidamadau dileen.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga XFS C/casiis Xildhimaan ayaa Warbaahinta u sheegay in Ciidamadu Xalay ku guulaysteen in ay guuda ahaanba soo afjaraan weerarka.
C/casiis Xildhimaan oo ah Afhayeenka Amniga ayaa tilmaamay in Ciidamadu gacanta ku dhigeen sadex ka mid dhagar qabayaashii weerarka soo qaaday mid kamid ah ayaa isku qarxiyey banaanka Hoteelka halka midka kalena uu gudaha Hoteelka isku qarxiyey sida uu sheegay Afhayeenka.
Ciidamada Amaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa goobta ka howl galay waxii ka dambeeyay weerarka ay ku qaadeen Maleeshiyaadka Al shabaab iyagoona Ciidamadu soo bad baadiyay muwaadiniin Soomaaliyeed oo ay doonaayeen in ay laayaan dhagar qabayaasha nabad diidka ah ee Al shabaab.
Wali Dowladdu ma shaacin tirada rasmiga ah oo ku dhimatay iyo kuwa ku dhaawacmay weerarka Argagixisadu ku qaadeen Hotelka Naasahablood 2 ee Degmada Xamar-weyne
Raagaan ka tirsanaa maleeshiyaadkii weerarka ku qaaday Hotelka Naasahablood 2 ayaa tusaale u ah guulaha ay Ciidmada Soomaaliya ka gaarayaan falalka Argagixisada nabad iyo nolal diidka ah ee Al shabaab ku dhibaatayeen Shacabka Soomaaliyeed.
Maleeshiyaadka nabad iyo nolal diidka ah ee Al shabaab ayaa habeen iyo maalinta ku howlan dhibaataynta iyo gumaadka Shacabka Soomaaliyeed taasoo ku tusaysa hadaf la,aanta Argagixisada hase yeeshee Ciidamada Amaanka Soomaaliya ayaa u taagan ka hortagida falalka guracan ee nabad diidku ku doonayaan dhibaataynta Shacabka.
Previous articleWasaaradda Amniga XFS oo sheeegtay in Gacanta lagu dhigay 3 ka mid ah Ragii weerarka gaystay’
Next articleTaliyaha Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed oo tacsi u diray dadkii ku waxyeeloobay Qaraxii Muqdisho shalay ka dhacay